Andiany 360SL Swinging Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Series Series 360SL mitsoka Dragon® Dredge
Ny dredge an'ny Series 360SL Swinging Dragon® dia dredge tohika azo alefa izay natao hiasa amin'ny fantsona tery sy tetikasa kely. Ity dredge marobe ity dia mety amin'ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny izay misy marinas, farihy ary tetik'ady fanadiovana tontolo iainana mora tohina.
Ny motera diesel tokana dia mandeha amin'ny paompy hydro-statika tsy miankina ary paompy faharoa ho an'ny fanaraha-maso mpanampy.
Fitaovana fanaraha-maso elektronika mifandanja ho an'ny asa dredging tena marina sy ny fanamoran'ny mpandraharaha.
Ny mpandeha tokana dia mitsambikina amin'ny fametrahana haingana sy fampivoarana ny dredge tsy misy vatofantsika sy tariby.
Paompy dredge azo zahana mora azo noho ny fikolokoloana sy ny fanitsiana paompy, raha ilaina izany.
Hizaha habe: 8 ″ x 8 ″ (200 mm x 200 mm)
Moteur Main John Deere 9.0L Marin-dranomasina 6090AFM85: 375 HP (280 kW)
Ny halalin'ny dredging farany ambany: 15 ′ (4.5 m)
Rafitra fametrahana ny dredge
Valve fanamaivanana / famoahana